Iindaba -Izinto ezininzi ezibalulekileyo zomonakalo wengxowa yelaphu kwindawo yokuqokelela uthuli lwenkanyamba
Ukonakala kwesangqa esisezantsi sebhegi kwinkanyamba, kuyinto exhaphake kakhulu ukuvela ekususeni uthuli ngesantya somoya sokucoca esiphakamileyo kunepakethe okanye ubunzima obunamandla. Inkanyamba esetyenziswayo ngoku ifumene ingxowa yomonakalo yahlulwe yangamacandelo amabini, olunye uhlobo lwenziwa kusetyenziswa umjikelo, ubomi, ingxowa kukuguga kwendalo kunye nomonakalo, olunye uhlobo ingxowa ayihambelani nomjikelo wokusetyenziswa, kulula ukuyinxiba ngenxa yezizathu ezininzi ezahlukeneyo, ibhegi yokutshintsha rhoqo ayonyusanga kuphela amandla abasebenzi, kwaye yonyusa iindleko zokusebenza kwezixhobo zokususa uthuli.
Kwishishini lothuli, ukukhuselwa kwengxowa yelaphu kwindawo yokuqokelela uthuli lwenkanyamba kubaluleke kakhulu. Oku kulandelayo zizinto ezininzi ezibalulekileyo ekufuneka ukwazisile ukonakala kwengxowa yelaphu kwindawo yokuqokelela uthuli:
Okokuqala, coca isantya somoya
Isantya esiphezulu secebo lokucoca ulwelo sengqokelela uthuli lwengxowa sesona sizathu siphambili somonakalo wengxowa yothuli. Kwiminyaka yakutshanje, ezinye iiyunithi zinciphisa ngokungaboniyo iindleko zezixhobo, zonyusa inzuzo, kuyilo lwefilitha yebhegi, isantya somoya wokucoca ulwandiso, ngexesha elifutshane umsebenzisi akanalo mpendulo icacileyo, kodwa uyanciphisa kakhulu ubomi benkonzo yengxowa . Ngale ndlela, endaweni yokonga imali kubathengi, izisa umthwalo omkhulu woqoqosho kwaye ichitha ixesha.
Okwesibini, ukusetyenziswa kobushushu
Isitshixo sebhegi yengubo kukukhetha umqokeleli wokhozi lwenkanyamba ofanelekileyo kubushushu bothuli obuhambelanayo. Ukuba iqondo lobushushu liphezulu kakhulu, ingxowa yokususa uthuli ekhethiweyo ukuba idlule kubushushu obuqhelekileyo bokusebenza, ibhegi iya kunciphisa ubomi benkonzo, enzulu iya kutshiswa ngexesha elifutshane. Ke ngoko, ekukhetheni iingxowa zelaphu ukumisela ukubala kobushushu bomqokeleli wothuli, ekukhetheni kwengxowa yothuli ehambelanayo.
Okwesithathu, umgangatho wemveliso
Ukulungiswa kweengxowa zelaphu kubaluleke ngakumbi. Kwiminyaka yakutshanje, abanye abavelisi abancinci basebenzisa oomatshini abancinci bokuthunga izixhobo zokusebenza, kunye nokusebenza ngomgca ongaphantsi njengezinto ezingavunyelwanga, inkohliso yokwenyani, inqanaba lokulungisa lisemva kakhulu. Yenza ingxowa yothuli isetyenziselwe ixesha elifutshane iya kubonakala ivulekile, iqhekeza, yehla ezantsi njalo njalo. Ubungakanani bengxowa yelaphu incinci kancinci nangona inokusetyenziswa, kodwa kwinani le adsorption.
I-Fibreglass yeenaliti-Isihluzi seFilter yeFilter, Ingqokelela yothuli, Ipholiyesta yePhepha leenaliti-eziQhelekileyo, Isihluzi seFelt Bag, Isamente Uqokeleli Uthuli, Uhlobo lweBhegi luQokelele uthuli,